Maqaallada Ian Cleary ee Martech Zone |
Maqaallada by Ian Cleary
Talaado, Maarso 13, 2018 Ian Cleary
Suuq geynta waa mid weyn. Waxaad abuureysaa waxyaabo. Waxaad ku socotaa taraafikada boggaaga. Waad baddeleysaa qaar ka mid ah taraafikadaas oo waxaad iibisaa alaabadaada iyo adeegyadaada. Laakiin… Xaqiiqdu waxay tahay inay ka adag tahay sidii hore in la helo natiijada bogga koowaad ee Google oo la wado taraafikada dabiiciga ah. Suuqgeynta mawduucyada waxay noqoneysaa mid si xamaasad leh loo tartamo. Gaaritaanka jirka ee kanaalada warbaahinta bulshada ayaa sii wadaya inuu hoos u dhaco. Markaa haddii aad adiguba ogaatay in suuq-geynta soo-dhoofintu kaliya uusan kugu filnayn, waxaad u baahan doontaa
Xaqiiqdu waxay tahay inaadan sida caadiga ah wax ku iibin kanaallada warbaahinta bulshada laakiin waxaad ka abuuri kartaa iibin warbaahinta bulshada ah haddii aad hirgeliso dhammaystir dhammaystiran geeddi-socodka. Nidaamkayaga PRISM 5 waa nidaam aad u adeegsan karto hagaajinta beddelka warbaahinta bulshada. Qodobkaan waxaan kusoo bandhigi doonaa qaabka 5-ta talaabo ah waxaanna uga talaabsan doonnaa tusaale ahaan aaladaha aad u adeegsan karto tillaabo kasta oo geeddi-socodka ah. Waa tan PRISM: Si aad u dhisto PRISM-kaaga adiga
Balooggu wuxuu noqon karaa isha weyn ee taraafikada boggaaga, laakiin waa waqti qaadasho si loo abuuro qoraallo maqaal ah oo had iyo jeer ma helno natiijooyinka aan dooneyno. Markaad blog sameyso, waxaad dooneysaa inaad hubiso inaad ka hesho qiimaha ugu badan. Maqaalkan, waxaan ku soo bandhignay 5 qalab oo gacan ka geysan doona hagaajinta natiijooyinkaaga qorista, taasoo horseedi doonta taraafikada badan iyo, ugu dambeyn, iibka. 1. Abuur Sawirkaaga adoo adeegsanaya Canva Sawir qaadis